Yusuf Garaad: Dib u Milicso Mustaqbalka Villa Somalia
Laga soo billaabo Madaxweyne Cabdullaahi Yusuf Axmed, Guddoomiye Shariif Xasan iyo Ra'iisal Wasaare Cali Maxamed Geeddi, ku xiji Nuur-Cadde, Shiikh Shariif, Xasan Shiikh, Saacid Shirdoon, Cabdiweli Shiikh, Cumar Cabdirashiid iyo qaar kale oo Wasiirro u badan Madaxda Sare ee dalka soo martay intooda badan inta aanay xilka qaban waxay ahaayeen rag aan macriifo wanaagsan leennahay. Qaar aan sheeko wadaag nahay. Kuwo aan arday wada ahayn iyo qaar aan awal ku tilmaami jiray saaxiibbo dhow oo aan guryaha iyo Hoteellada isku booqan jirnay inkasta oo markii dambe aan u beddelay in ay yihiin rag aan is naqaan.
"Siyaasiyiinta" iyo mukhallisiinta ka shaqeysta ee aan u shaqeyn Dowladnimada Soomaaliya oo aan iyagu Xamar ku yarayn waxaa ku soo biiray qaar deggan caasimado Geeska Afrika ah. Qaarkood ilaa ololihii doorashada ayay joogeen dalka. Qaar kale waxay buraashadahooda soo dhaansadeen markii ay isbeddelka maqleen. Aad ayay u xiiqsan yihiin. Wakhtigu waa is gurayaa. Midkii aan ka soo tegin shaqo ay tahay in uu dib ugu laabto waxaa tirsan maalmaha uu iska xajin karo nolosha qaaliga ah ee Muqdisho.
Hoggaamiyaha ay lafdharkiisu jilicsan tahay, midka xan-ku-noolka ah iyo ma-hubsadaha aan su'aalaha isweydiin waa uu u nugul yahay baqa-ku-maalka. Sidaasna waxaa ku wiiqma danta Soomaaliyeed iyo kalsoonida lagu qabo hoggaamiyaha.